ဒီအချက်လေးတွေ ပြနေရင် သတိထားပါ။ သင်တို့အချစ်ရေး လမ်းခွဲခါနီးနေပြီ..။ - APANNPYAY
/ ဒီအချက်လေးတွေ ပြနေရင် သတိထားပါ။ သင်တို့အချစ်ရေး လမ်းခွဲခါနီးနေပြီ..။
ဒီအချက်လေးတွေ ပြနေရင် သတိထားပါ။ သင်တို့အချစ်ရေး လမ်းခွဲခါနီးနေပြီ..။
အချစ်တစ်ခုဟာ မွေးဖွားချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ရှင်သန်ကြီးထွားချိန်ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲကမှ တစ်ချို့သော အချစ်တွေပဲ ဆက်လက်ရှင်သန်ကြပြီး အများစုကတော့ အဆုံးသတ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ခံရခက်ခဲတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ ဒီတော့ သင့်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ အဆုံးသတ်ခရီးနားရောက်နေပြီလား? ဒီလို အဆုံးသတ်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို တွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သတိထားပြီး အချိန်မှီ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
(၁) ရင်းနှီးမှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာပြီ။
သင်တို့တွေ အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာပြီဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ယောက်လုံးဖြစ်စေ ဒီအချစ်ရေးကို ငြီးငွေ့လာတဲ့ သဘောပါပဲ။ သင်တို့ရဲ့ စကားဝိုင်းတွေက စိုစိုပြေပြေမရှိတော့သလို၊ အပြုအမူတွေကလည်း အေးစက်ကောင်း အေးစက်လာပါမယ်။ စကားပြောမိပြန်ရင်လည်း ရန်ဖြစ်စကားများနေရတာက ပိုအကြိမ်ရေ များချင်များနေပါမယ်။
စိတ်ပင်ပန်းလာပြီဆိုတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ပြတ်ကျကာနီး ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အချိန်နဲ့ တူပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုတွေ၊ စကားများရန်ဖြစ်မှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကြောင့် နောက်ဆုံး စိတ်တွေ ပင်ပန်းလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အချိန်ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒီအဆင့်ရဲ့ နောက်မှာတော့ လက်လျော့အရှုံးပေးခြင်းဆိုတာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။
တွေ့နေကျ အချိန်တွေနဲ့ တွေ့နေကျ နေရာတွေမှာလည်း အတူရှိမနေချင်တော့ပါဘူး။ သံယောဇဉ်တွေ ရှိကောင်းရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်တို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တွေ့နေရတာကိုက စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြစ်လာနေပါပြီ။ တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းအလိုလို စကားတွေလည်း များမယ်။ ကြည်နူးချိန်နည်းနည်းနဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ချိန်တွေ များလာပြီဆိုရင်တော့ လူ့စိတ်သဘာဝအရ တစ်ယောက်နားမှာတစ်ယောက် ရှိမနေချင်တော့ပါဘူး။
(၄) စကားတွေ များလာမယ်။
သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ စည်းလုံးမှုမရှိတော့တဲ့အပြင် မတူညီတဲ့ သဘောထားတွေအတွက်လည်း ညှိနှိုင်းဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။ ထစ်ခနဲရှိတာနဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး စိတ်မချမ်းမြေ့စရာအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ချစ်သူတွေ ရန်ဖြစ်တာအဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် အမြဲတမ်း ရန်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းတော့ပါဘူး။
(၅) နားလည်မှုတွေ၊ လေးစားမှုတွေ။
"သူသာဆိုရင်၊ ကိုယ်သာဆိုရင်" ဆိုတဲ့ စာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်၊ နားလည်မှုရှိတဲ့စိတ်တွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ ရှိရမယ့် အခြေခံလေးစားစိတ်ပါ။ ဒါတွေ လုံးဝကို ပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးဟာ ဆေးမှီနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။
(၆) ကြင်နာစကားတွေ ဆိတ်သုဉ်းသွားပြီ။
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမဆိုထားနဲ့ တခြားသော ကြင်ကြင်နာနာစကားတွေ ပြောရတာကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်လိုလို၊ တစ်မျိုးကြီးလိုလို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ အချစ်ရေး နာတာရှည်ရောဂါရဲ့ ရလဒ်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။
(၇) လွတ်မြောက်လမ်းတွေ ရှာလာမယ်။
ဒီလို စိတ်သောကတွေ ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ လွတ်မြောက်လမ်းတွေ ရှာမိပါတော့တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ မိသားစု၊ အလုပ်အကိုင် စတဲ့နေရာတွေမှာ စိတ်ကိုမြှပ်နှံပြီး သက်သာရာရအောင် လုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်အတွက် ပျော်စရာလို့ထင်တဲ့ အရာမှန်သမျှနောက်ကိုလိုက်ရင်း လွတ်မြောက်ရာ လွတ်မြောက်ကြောင်း အားထုတ်ပါတော့မယ်။
ဒီလိုအခြေအနေပေါင်းစုံ ကြုံနေရပြီဆိုရင် အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပဲ သင်တို့အချစ်ရေးရဲ့ နေဝင်ချိန်ကို ရောက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေဝင်ချိန်ဟာ သင်ထင်သလို စိတ်ညစ်စရာတွေ မရှိတော့ဘူး၊ ပေါ့ပါးသွားပြီလို့ ခံစားရချင်မှ ခံစားရမှာပါ။ သင်တို့ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ သံယောဇဉ်တွေကပဲ သင့်ကို မပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဖြစ်လာစေဦးမှာပါ။ ဒီတော့ အချိန်မီ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူးဆိုရင် နေဝင်ချိန်ရောက်လာတာတောင် စိတ်သောကတွေကို မျိုးစုံခံစားနေရဦးမှာပါ။
Credit: (Focus Youth)
အခဈြတဈခုဟာ မှေးဖှားခြိနျဆိုတာရှိပါတယျ။ ရှငျသနျကွီးထှားခြိနျဆိုတာလညျး ရှိပါတယျ။ အဲဒီ့ထဲကမှ တဈခြို့သော အခဈြတှပေဲ ဆကျလကျရှငျသနျကွပွီး အမြားစုကတော့ အဆုံးသတျသှားတတျပါတယျ။ ဒါဟာ လကျခံရခကျခဲတဲ့ အမှနျတရားတဈခုပါ။ ဒီတော့ သငျ့တို့ရဲ့ အခဈြရေးဟာ အဆုံးသတျခရီးနားရောကျနပွေီလား? ဒီလို အဆုံးသတျရဲ့ လက်ခဏာတှကေို တှနေ့ရေပွီဆိုရငျတော့ သတိထားပွီး အခြိနျမှီ ပွငျဆငျနိုငျဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။
(၁) ရငျးနှီးမှုတှေ ပြောကျဆုံးလာပွီ။
သငျတို့တှေ အခြိနျယူတညျဆောကျထားတဲ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျမှုတှေ ပြောကျဆုံးလာပွီဆိုရငျတော့ နှဈယောကျထဲက တဈယောကျဖွဈစေ၊ နှဈယောကျလုံးဖွဈစေ ဒီအခဈြရေးကို ငွီးငှလေ့ာတဲ့ သဘောပါပဲ။ သငျတို့ရဲ့ စကားဝိုငျးတှကေ စိုစိုပွပွေမေရှိတော့သလို၊ အပွုအမူတှကေလညျး အေးစကျကောငျး အေးစကျလာပါမယျ။ စကားပွောမိပွနျရငျလညျး ရနျဖွဈစကားမြားနရေတာက ပိုအကွိမျရေ မြားခငျြမြားနပေါမယျ။
စိတျပငျပနျးလာပွီဆိုတဲ့ အဆငျ့ကိုရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ ပွတျကကြာနီး ကွိုးတဈခြောငျးကို ဆုပျကိုငျထားတဲ့ အခြိနျနဲ့ တူပါတယျ။ သငျတို့ရဲ့ သဘောထား မတိုကျဆိုငျမှုတှေ၊ စကားမြားရနျဖွဈမှုတှေ၊ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အကွောငျးအရာ အမြိုးမြိုးတို့ရဲ့ သကျရောကျမှုတှကွေောငျ့ နောကျဆုံး စိတျတှေ ပငျပနျးလာခဲ့ပွီဆိုတဲ့ အခြိနျကို ရောကျလာပါပွီ။ ဒီအဆငျ့ရဲ့ နောကျမှာတော့ လကျလြော့အရှုံးပေးခွငျးဆိုတာတှေ ရှိနတေယျဆိုတာ သတိပွုစလေိုပါတယျ။
တှနေ့ကြေ အခြိနျတှနေဲ့ တှနေ့ကြေ နရောတှမှောလညျး အတူရှိမနခေငျြတော့ပါဘူး။ သံယောဇဉျတှေ ရှိကောငျးရှိနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျတို့တဈယောကျကိုတဈယောကျတှနေ့ရေတာကိုက စိတျညဈစရာတှေ ဖွဈလာနပေါပွီ။ တှတေဲ့အခြိနျတိုငျးအလိုလို စကားတှလေညျး မြားမယျ။ ကွညျနူးခြိနျနညျးနညျးနဲ့ စကားမြားရနျဖွဈခြိနျတှေ မြားလာပွီဆိုရငျတော့ လူ့စိတျသဘာဝအရ တဈယောကျနားမှာတဈယောကျ ရှိမနခေငျြတော့ပါဘူး။
(၄) စကားတှေ မြားလာမယျ။
သငျတို့ရဲ့ အခဈြရေးဟာ စညျးလုံးမှုမရှိတော့တဲ့အပွငျ မတူညီတဲ့ သဘောထားတှအေတှကျလညျး ညှိနှိုငျးဖို့ မကွိုးစားတော့ပါဘူး။ ထဈခနဲရှိတာနဲ့ စကားမြားရနျဖွဈပွီး စိတျမခမျြးမွစေ့ရာအခွအေနမြေိုးတှနေဲ့ပဲ အဆုံးသတျလရှေိ့ပါတယျ။ ခဈြသူတှေ ရနျဖွဈတာအဆနျးမဟုတျပမေယျ့ အမွဲတမျး ရနျပဲဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ မကောငျးတော့ပါဘူး။
(၅) နားလညျမှုတှေ၊ လေးစားမှုတှေ။
"သူသာဆိုရငျ၊ ကိုယျသာဆိုရငျ" ဆိုတဲ့ စာနာထောကျထားတဲ့စိတျ၊ နားလညျမှုရှိတဲ့စိတျတှလေညျး မရှိတော့ပါဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွားမှာ ရှိရမယျ့ အခွခေံလေးစားစိတျပါ။ ဒါတှေ လုံးဝကို ပြောကျကှယျသှားပွီဆိုရငျတော့ သငျတို့ရဲ့အခဈြရေးဟာ ဆေးမှီနိုငျဖို့ ခဲယဉျးသှားပါပွီ။
(၆) ကွငျနာစကားတှေ ဆိတျသုဉျးသှားပွီ။
ခဈြတယျဆိုတဲ့ စကားမဆိုထားနဲ့ တခွားသော ကွငျကွငျနာနာစကားတှေ ပွောရတာကိုပဲ စိတျထဲမှာ ကသိကအောကျလိုလို၊ တဈမြိုးကွီးလိုလို ခံစားနရေမယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ ကောငျးတဲ့လက်ခဏာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ အခဈြရေး နာတာရှညျရောဂါရဲ့ ရလဒျဆိုးတဈခုပါပဲ။
(၇) လှတျမွောကျလမျးတှေ ရှာလာမယျ။
ဒီလို စိတျသောကတှေ ခံစားနရေပွီဆိုရငျတော့ လှတျမွောကျလမျးတှေ ရှာမိပါတော့တယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျး၊ မိသားစု၊ အလုပျအကိုငျ စတဲ့နရောတှမှော စိတျကိုမွှပျနှံပွီး သကျသာရာရအောငျ လုပျပါတယျ။ နောကျဆုံး ကိုယျ့အတှကျ ပြျောစရာလို့ထငျတဲ့ အရာမှနျသမြှနောကျကိုလိုကျရငျး လှတျမွောကျရာ လှတျမွောကျကွောငျး အားထုတျပါတော့မယျ။
ဒီလိုအခွအေနပေေါငျးစုံ ကွုံနရေပွီဆိုရငျ အနှေးနဲ့အမွနျဆိုသလိုပဲ သငျတို့အခဈြရေးရဲ့ နဝေငျခြိနျကို ရောကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနဝေငျခြိနျဟာ သငျထငျသလို စိတျညဈစရာတှေ မရှိတော့ဘူး၊ ပေါ့ပါးသှားပွီလို့ ခံစားရခငျြမှ ခံစားရမှာပါ။ သငျတို့ကွားမှာ ရှိနတေဲ့ သံယောဇဉျတှကေပဲ သငျ့ကို မပွတျသားတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ဖွဈလာစဦေးမှာပါ။ ဒီတော့ အခြိနျမီ ပွငျဆငျနိုငျခွငျး မရှိသေးဘူးဆိုရငျ နဝေငျခြိနျရောကျလာတာတောငျ စိတျသောကတှကေို မြိုးစုံခံစားနရေဦးမှာပါ။